Blockchain သတင်းများ9ဇန္နဝါရီလ 2018 - Blockchain သတင်းများ
Crypto Market က၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် 2018
ဇန္နဝါရီလ 9, 2018 admin
Blockchain သတင်းများ9ဇန္နဝါရီလ 2018
ဗားမောင့်အတွက်အဆိုပြုထားသော Cryptocurrency စည်းမျဉ်းများ
ဗားမောင့်အတွက်တစ်ဦးကပြည်နယ်ဥပဒေပြုအမတ်တစ် blockchain နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အသစ်တစ်ခုကိုစည်းမျဉ်းမူဘောင်ကိုဖန်တီးရန်တစ်ဥပဒေကြမ်းအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်.
cryptocurrencies နှင့် blockchain အပေါ်အများအပြားအစီရင်ခံစာများရှိစေရေးအပြင်, ဒါကြောင့်အထူးသပြည်နယ်အဖြစ်အချို့သောကုမ္ပဏီများခွဲခြားနိုင်ပုံကိုဖော်ပြထားပါတယ် “ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီများမှ,” သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်များလုပ်ကိုင်ရန်ကြောင်းအထူးသဖြင့်သူတို့အား.
သူများသည်ကုမ္ပဏီများသည်လို, ဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုလျှင်, ဆပ်ဖို့လိုအပ်လိမ့် “ယင်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး၏ပုံစံကို $ 0.01 မှတစ်ဦးငွေပေးငွေယူအခွန်နှင့်ညီမျှအတွက်” cryptocurrency ၏အသစ်တစ်ခုယူနစ်နေသူများကဖန်တီးအခါတိုင်း, ကုန်သွယ်သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်း.
အသစ်ဥပဒေကြမ်းကိုလည်းတောင်းဆို “Fintech ထိပ်သီးအစည်းအဝေး,” ဗားမောင့်နည်းပညာရဲ့ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပုံကိုဆွေးနွေးရန်ပြည်နယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသက်ဆိုင်သူများအတူတကွဆောင်ကြဉ်းလို့. အဆိုပါပြည်နယ်မွှုပျနှံမယ်လို့ $25,000 ထိုအဖြစ်အပျက်ရန်ပုံငွေကိုကူညီ, အဆိုပါစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအေဂျင်စီနှင့်ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအောက်ရှိ.
တွင် JPMorgan Chase CEO ဖြစ်သူဂျေမီလွတ်အောင် Bitcoin တစ်လိမ်လည်မှုဟုနောင်တ
တွင် JPMorgan Chase ဥက္ကဋ္ဌ & CEO ဖြစ်သူဂျေမီလွတ်အောင်သူတစ်ဦးကိုစက်တင်ဘာလဘဏ်လုပ်ငန်းညီလာခံမှာလိမ်လည်မှု Bitcoin ကိုခေါ်ရသောအတိတ်မှတ်ချက်များနောင်တအင်္ဂါနေ့ကပြောပါတယ်.
ထိုအချိန်မှာ, လွတ်အောင်သူတို့ crypto-ငွေကြေးအတွက်ကုန်သွယ်မယ်ဆိုရင်သူ JPMorgan ကုန်သည်များပစ်ခတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်.
"ဒီ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကွင်းဆက် အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါသည်. သင်သည်ထိုတူသော crypto ယန်းနှင့်ချီသောဒေါ်လာငွေများနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယများရှိနိုင်ပါသည်…"လွတ်အောင် FOX စီးပွားရေးနှင့်အတူတစ်ဦးသီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်ပြောကြားခဲ့သည်.
ငါ့ထံသို့အဆိုပါ Bitcoin ကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ရရှိသွားတဲ့အဖြစ်အစိုးရများ Bitcoin အကြောင်းကိုဂုဏ်နခံစားမှုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအမြဲခဲ့သည်, ငါ့ကိုတခြားလူထက်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်ရှိ. ငါမှာရှိသမျှကိုဘာသာရပ်အတွက်အများကြီးစိတ်ဝင်စားဘူး.
အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်ကဘဏ်နိုင်ငံတော်သမ္မတ: Bitcoin အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ဦးယုံကြည်ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ပါဘူး
Bitcoin နှင့်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဟာ U.S မှသိသိသာသာခြိမ်းခြောက်မှုကိုယ်စားပြုကြဘူး. ဒေါ်လာစျေး, Minneapolis ဗဟိုဘဏ်ကိုသမ္မတ Neel Kashkari ကပြောပါတယ်.
“ငါအမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ဒေါ်လာတစ်ဦးယုံကြည်ပြိုင်ဘက်အဖြစ် Bitcoin မမြင်မိပါဘူး, နှင့်အကြောင်းပြချက်သင့်ကိုယ်ပိုင်အကြွေစေ့ကိုသင် entry ကို၏အတားအဆီးဖန်တီးငါ့ကိုငါ့ကိုယ်ပိုင် virtual ငွေကြေးကို … သုညဖြစ်ပါသည်,” သူမင်နီဆိုတာအတွက်အများပြည်သူအသွင်အပြင်ကာလအတွင်းကပြောပါတယ်.
Kashkari Bitcoin နှင့်အခြား cryptocurrencies အနာဂတ်၌တကမ္ဘာလုံးကြီးမြတ်သောအခန်းကဏ္ဍအပေါ်ယူစေခြင်းငှါဝန်ခံ, ဒါပေမယ့်သူကအခုသူတို့မေးခွန်းတစ်ခုအမှတ်အသားဆက်လက်တည်ရှိဘို့ကပြောပါတယ်.
“ဒါကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း created ခံရသမျှသောဤအသစ်က alt + ဒင်္ဂါးပြားရဲ့, သငျတို့သတူးဖော်ခံရဖို့သွားကြသည်သာဤမျှလောက်များစွာသော Bitcoin ရှိတယ်ဟုပြောစေခြင်းငှါအနေဖြင့်, ဒါကြောင့်ဤအရာအလုံးစုံကိုအခြား alt + ဒင်္ဂါးပြားတွေနဲ့ muddled ရရှိပါလျှင်သင်ဆဲငွေကြေးဖောင်းပွမှုရှိနိုင်ပါသည်, သင်ယုံကြည်ဖို့ရာသူမြားကိုမသိရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့,” ဟုသူကပြောသည်. “ကိုယ့်ကြှနျုပျတို့သညျဤအထဲကချောက်ချားပုံကိုသိမတိုင်မီဒီအသွားတစ်ရှည်လျားသောလမ်းရှိပါတယ်ထင်တယ်.
Phillip Securities မှထိုင်းထိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနိုင်ငံတကာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအနကျအဓိပ်ပါယျကုန်သွယ်ဝန်ဆောင်မှုကနေတစ်ဆင့် Bitcoin အပေါ်သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်, ထိုင်းနိုင်ငံ၏စျေးကွက်အားပြိုင်မှုပြောင်းရွှေ့တရားဝင်ကြောင်းသဘောတူညီမှု၌ရှိကြ၏စဉ်.
ထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုချီကာဂိုဘုတ်အဖွဲ့ Options ကိုချိန်းတွင် Bitcoin အနာဂတ်ကုန်သွယ်ကမ်းလှမ်း (CBOE) နှင့်ချီကာဂို Mercantile ချိန်း (CME).
မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာအနိမျ့ကြည့်ရှု Kiong တချို့ထိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ Bitcoin စိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်အနာဂတ်အတွက်မွေးရာပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအန္တရာယ်များကိုလက်ခံနိုင်ကြသည်ဟုဆိုသည်.
“သူတို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောငွေပေးချေမှုစနစ်များရှိသည်နှင့်အမေရိကန် Securities and Exchange Commission အားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြသည်အတိုင်း CBOE နှင့် CME တခုတခုအပေါ်မှာအခြေခံပစ္စည်းအဖြစ် Bitcoin အသုံးပြုခြင်း Bitcoin အနာဂတ်ပိုမိုလက်ခံမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်,” မစ္စတာအနိမျ့တစ်ဦးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုပါတယ်.
“ဒီကတည်းက [ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု] ထုတ်ကုန်တစ်ဦးစံစည်းမျဉ်းကိုယျခန်ဓာ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ဖြစ်ပါသည်, ဤအမှု၌စိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုအမှတ်လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒီထုတ်ကုန်မြင့်မားသောအန္တရာယ်များရှိပါတယ်မဟုတ်ဘဲပုံကို,” အဆိုပါကြေညာချက်ကဆိုသည်.
ဝန်ကြီးချုပ်ပရာယုချန်-O-cha မကြာသေးမီက Bitcoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏အန္တရာယ်များအကြောင်းကိုလူတွေကိုပညာပေးဖို့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်.
ဆွစ်ဇာလန် Blockchain တာဝန်အင်အားသုံးလွှတ်တင်
ဆွစ်အစိုးရ blockchain စတင်နှင့် ICOs ပတျဝနျးကငျြက၎င်း၏စည်းမျဉ်းမူဘောင်ခိုင်မြဲရန်အုပ်စုအသစ်ဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်.
အလုပ်အဖွဲ့ Blockchain - ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Ueli Mausrer နှင့်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နှင့်ပညာရေးဝန်ကြီး Johann Schneider-Ammann အားဖြင့်အကွက်ချလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် - ဖက်ဒရယ်နှင့်ဒေသခံနှစ်ဦးစလုံးအရာရှိများပါဝင်သည်, အဖြစ်အမျိုးမျိုးသော blockchain စတင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်များ, တစ်ဦးအချက်ကိုစာရွက်အညီ.
အဆိုပါအုပ်စုသည် ICOs နှင့် blockchain ကုမ္ပဏီများသည်ပတ်ဝန်းကျင်ဥပဒေလမ်းညွှန်ချက်များမှာကြည့်ရှုမည်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေး Matters များအတွက်ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ် - ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်မူဝါဒကအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက်ရှိအစိုးရ၏ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားများကိုကိုယ်စားပြုတာဝန်ရှိသည်ဖက်ဒရယ်ခန္ဓာကိုယ်.
Schneider-Ammann သူတို့ရဲ့ဥပဒေရေးရာမူဘောင်ပတျဝနျးကငျြစကားဝိုင်းမှာ blockchain ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပါဝင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း.
သူကဆက်ပြောသည်: “Blockchain အများအပြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်နည်းပညာအဖြစ်ကိုပိုမိုအရေးကြီးသောဖြစ်လာ, မရင့် crypto ဘဏ္ဍာရေး. အဘယ်အရာကိုလိုအပ်လစ်ဘရယ်စည်းမျဉ်းဖြစ်ပါသည်, သောတစ်ချိန်တည်းမှာအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချနေစဉ်အတွင်းဆွစ်ဇာလန်ရဲ့အနေအထားကိုအဘို့အခွင့်အလမ်းများဖွင့်လှစ်။”
အဆိုပါအလုပ်အဖွဲ့ Blockchain ရဲ့ပထမဆုံးအစည်းအဝေးကိုဇန်နဝါရီပျေါမှာရှိပါလိမ့်မယ်. 12, 2018.
ရောက်စေဖို့တစ်ဦးကနှစ်ရှည်လများအဆိုပြုချက်ကို “စမတ်” Bitcoin ၏အဓိကအသားတင်ပဲပိုမိုနီးကပ်စွာအကောင်အထည်ဖော်မှုတခြေလှမ်းကိုယူထားပါတယ်မှစမတ်စာချုပ်များ.
developer များ Merkel Abstract Syntax သစ်ပင်များများအတွက်ဆွဲတောင်းဆိုမှုကိုတင်သွင်းခဲ့ကြ (ရွက်တိုင်), ဒီစမတ်ကန်ထရိုက်အဆိုပြုချက်ကို Bitcoin ရဲ့ကုဒ်သို့ယင်း၏ပေါင်းစည်းမှုရှာဆွဲတောင်းဆိုမှုကို၏ဘာသာရပ်ခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် marking.
ဤရွေ့ကားပုဂ္ဂလိကမတ်ကန်ထရိုက်အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးငွေပေးချေမှုကို process မယ်လို့သောသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စံနှုန်းများသတ်မှတ်ခွင့်ပြုမယ်လို့, မျိုးစုံအချက်များအားဖွင့်အစီအစဉ်ကိုအားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်. အဆိုပါစမတ်ကန်ထရိုက်ထို့နောက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ် execute မယ်လို့.
BIPs များ၏ပေါင်းစပ်ကိုလည်းအမှန်တကယ် Bitcoin blockchain အပေါ်တစ်ဦးကျစ်လစ်သိပ်သည်းထုံးစံ၌သိုလှောင်ထားခံရဖို့ကဤစမတ်ကန်ထရိုက်များအတွက်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, သူတို့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအာကာသ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုတက်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်, အရောင်းအသီးအသီးအပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွင်းသိမ်းဆည်းထားနိုင်အချက်အလက်များ၏သို့မဟုတ်ပမာဏ.
developer များနှင့်ကျယ်ပြန့် Bitcoin အသိုင်းအဝိုင်းကပြောင်းလဲမှုအတည်ပြုလိုလျှင်, ကပျော့လမ်းဆုံလမ်းခွလမ်းဖြင့် Bitcoin မှဆက်ပြောသည်နိုင်.
ဘယ်လို ICO Market ကပြောင်းလဲကြလိမ့်မည် 2018?
2017 explosi ကိုမြင်လျှင် ...
ဘယ်လို blockchain နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးပါဘူး 2018?
ဘယ်လို Cryptocurrency M က ...
Previous Post:ကြေးနန်း ICO အစီအစဉ်များ
Next Post:အဘယ်သူသည် crypto စက်မှုလုပ်ငန်းဖို့အကြီးမားဆုံးအလှူငွေလုပ်? ထိပ်တန်း 7
အဘယ်အရာကို Bitcoin Core ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြ
Blockchain သတင်းများ 20 ဇန္နဝါရီလ 2018
အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေး၏စီမံကိန်း Bitcoin ဖြစ်ပါတယ် ?
Blockchain သတင်းများ 19 ဇန္နဝါရီလ 2018
ထိပ်တန်း 8 Cryptoсurrencyအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းလ် Application ကို
Blockchain သတင်းများ 18 ဇန္နဝါရီလ 2018
ဇန္နဝါရီလ 20, 2018 admin
The main customer of the network Bitcoin Core – isaclient
ဇန္နဝါရီလ 19, 2018 admin
Natalya Kaspersky ကနေ view ၏အချက်: Bitcoin isaProject of
Powered by WordPress နှင့် Wellington.